Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment आज बि. सं. २०७७ माघ १२ गते सोमवारको राशिफल हेर्नुहोस् - Pnpkhabar.com
आज बि. सं. २०७७ माघ १२ गते सोमवारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज बि. सं. २०७७ माघ १२ गते, सोमवार, २५ जनवरी २०२१। पौष शुक्लपक्ष, द्वादशी तिथि। मृगशिरा नक्षत्र। चन्द्रराशि– वृष १२:२५ बजेदेखि मिथुन।
विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। बोलीको भरमा चिताएको काम सम्पादन हुन सक्छ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। मध्याह्नदेखि सहयोगीहरू जुट्नाले काम बन्नेछ। मेहनतले प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सफल भइनेछ। वादविवादमा अघि नसर्नुहोला, पेसातर्फ राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ।
खर्चिलो काम थाल्नाले केही समस्या आउनेछन्। आवश्यकता पूरा गर्न सरसापट वा ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। मिहिनेतीहरूका लागि दिन फलदायी रहनेछ। आजको श्रमबाट पछिलाई भने फाइदा हुनेछ। दिउँसोतिर पारिवारिक भेटघाट हुनेछ। नयाँ योजना थाल्ने अवसर जुट्नेछ। पहिलेको सफलताले काममा हौसला प्रदान गर्नेछ।
मिहिनेत गर्दा आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्। आवश्यक भौतिक साधन सजिलै जुट्नेछन्। आम्दानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। दिउँसोदेखि खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ। आवश्यकता पूरा गर्न सरसापट वा ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ। सोखले फजुल खर्च बढाउनेछ। खर्च लागे पनि आँटेको काम बन्नेछ।
केही विवादास्पद काम गर्नुपरे पनि धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ र आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व हातलागी हुनेछ। काममा जग बसाउने मौका छ। मिहिनेतले सफलता दिलाउन सक्छ। दिउँसोदेखि आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिलेका कामबाट पनि प्रशस्त लाभ हुनेछ। उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। कृषि, पशुपालन र व्यापारमा फाइदा हुनेछ।
स्वास्थ्य कमजोर हुनाले काममा बाधा पर्नेछ। केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। तापनि प्रयत्न गर्दा बिस्तारै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। दिउँसोदेखि अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने मौका आउनेछ। सहयोगीहरूले हिम्मत दिलाउनेछन्। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। कामको दायित्व बढ्नेछ। तर व्यापार–व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ।
काममा साथीभाइको सहयोग जुट्नेछ। विद्यार्थीहरूमा ज्ञानको भण्डार बढ्नेछ। दैनिकी व्यस्त रहे पनि आम्दानी बढाउने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। दिउँसोदेखि स्वास्थ्य कमजोर रहनाले चिताएको काम पूर्ण नहुन सक्छ। पहिलेको नतिजा कमजोर हुनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। मिहिनेतको उपलब्धि कम मात्र प्राप्त हुनेछ। समस्याप्रति समयमा गम्भीर नबन्दा दु:ख पाइनेछ।
प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे पनि स्रोतसाधन जुट्नाले दिगो काम बन्नेछ। तर आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्, सजग रहनुहाेला। बुद्धिको उपयोगले काम बनाउन सकिनेछ। मध्याह्नपछि व्यापार बढ्नेछ भने व्यवसायमा लाभ हुनेछ। आयआर्जनका नयाँ स्रोत समेत फेला पर्नेछन्। तर परिस्थिति कमजोर हुनाले रमाइलो क्षणमा समेत मन ढुक्क नहुन सक्छ।
परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा कार्यसम्पादनमा समय लाग्नेछ। अरूका विषयमा चासो लिँदा आफ्नो काम बिग्रन सक्छ। दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। मिहिनेतले काम बन्नेछ भने भौतिक साधन जुटाउन सकिनेछ। पहिलेको सफलताले हौसला प्रदान गर्नेछ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। प्रतिस्पर्धात्मक काममा विशेष फाइदा हुनेछ।
हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला। प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन्। मध्याह्नदेखि बुद्धिको उपयोगले फाइदा उठाउन सकिनेछ। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजा पनि सबल रहनेछ। तर अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ।